एन आर एन गतिबिधि – Page4– MeroJilla.com
चितवनमा बैंकिङ/बीमा एक्स्पो सम्पन्न Friday, September 21st, 2018
चितवन । चितवनमा बैंकिङ÷बीमा एक्स्पो सम्पन्न भएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईँले शुक्रबार (असोज ५ गते) एक्स्पो कार्यक्रमको समापन गरे । समापन कार्यक्रममा बोल्दै चापागाईँले वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तर्गत बैंक र बीमालाई गाउँगाउँमा पुर्याएर वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य पूर्तिका बैंकिङ÷बीमा एक्स्पो कार्यक्रमको आयोजना गरिनु..
काटमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ भोलिदेखि नगर्ने घोषणा गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि फिर्ता नलिएको भन्दै महासंघ टिकट बुकिङ खुला नगर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल आयाल निगमले हालै मात्र इन्धनको मूल्य बृद्धि गरेको थियो । डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३/३ र पेट्रोलमा २ रुपैयाँ मूल्य बढाइएको छ । यातायात व्यवसायीले..
पर्वतका किसानहरु माछापालनतर्फ आकर्षित Friday, September 14th, 2018
पर्वत ।- यहाँका किसान माछापालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । पर्याप्त आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसान त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । मोदी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष विकास तिमिल्सिना र बागलुङको धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक यामप्रसाद शर्माले माछा बिक्रीबाट एउटै याममा रु ६० लाख आम्दानी गरेका छन् । उहाँहरुले सञ्चालन गरेको फार्ममा उत्पादित माछा पोखरा तथा काठमाडौँसम्म..
साना उद्योग नै आर्थिक समृद्घिको आधार – उद्योगमन्त्री नेपाल Monday, September 10th, 2018
काठमाडौं, भदौ ..
मनाङमा फस्टाउँदै फापर खेती Friday, September 7th, 2018
लमजुङ | समुन्द्री सतह देखी तीन हजार सात सय मिटर उचार्इमा रहेको हिमालपारीकाे जिल्ला मनाङमा यतिबेला फापर खेती फस्टाउँदै गएको छ । होटल व्यवसायी र किसान मिलेर फापर खेती गरेका हुन् । मनाङको तल्लो भाग नासों १ ताल क्षेत्रदेखि माथिल्लो मनाङ ङिस्याङ ९ खाङसारसम्म फापर खेती गरिएको छ । फापर खेति गरिरहेका किसान राजु गुरुङले भने, ‘हामीले खेती गर्दै आएको फापर यहाँको रैथाने हो,..
नेप्से २४ अंकले बढ्यो,सेयरबजारमा उच्च सुधार Thursday, September 6th, 2018
काठमाडौं। बुधबार सेयरबजारमा उच्च सुधार आयो । पछिल्ला दिन सुधारिन थालेको बजारमा यसदिन नेप्से र कारोबार दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि आएको हो । नेप्से झन्डै २४ अंकले बढेर १२ सय ३४ मा पुग्यो । उत्पादनमूलक र व्यापार समूहबाहेक अरु सबै समूहमा सुधार आयो । निर्जीवन बिमा समूह सबैभन्दा उच्च १६२ अंकले उकालो लाग्यो । जीवनबिमा समूह पनि ९५ अंकले बढ्यो । लघुवित्त समूह ४२ अंकले, जलविद्युत्..
प्रतिफल सहकारी कुस्माको अध्यक्षमा फेरी मोहन आचार्य र्निबिरोध । Sunday, September 2nd, 2018
पर्वत । प्रतिफल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को ७ औं वार्षिक साधारण सभा एवं तेस्रो अधिवेशनले पुन मोहन आचार्यलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । यस्तै सहकारीको उपाध्यक्षमा योगराज गिरी (बद्री), सचिवमा धिरजकुमार यादव, कोषाध्यक्षमा केदारनाथ आचार्य, सहकोषाध्यक्षमा गीता आचार्य पुरी, सह–सचिवमा सुवास रेग्मी चयन भएका हुन । सदस्यहरुमा अजय शर्मा, कमलकान्त चापागाई, तारा पोख्रेल, विनाकुमारी..
‘कालो सुन’ले परिचित अलैंचीको मूल्यमा निरन्तर गिरावट Monday, August 27th, 2018
इलाम । कालो सुनको नामले परिचित अलैंचीको मूल्यमा गिरावट आएपछि किसान निराश बनेका छन् । परम्परागत भट्टीमा अलैची सुकाउँदै आएका उनीहरुको आधुनिक भट्टीतर्फ आकर्षण नहुँदा र पहुँच पुग्न नसक्दा पनि उत्पादित अलैंचीले उचित मूल्य पाउन नसकेको हो । अलैची गुणस्तरीय बन्न नसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत यसको मूल्य खस्किँदै गएको छ । अलैँचीको लागि प्रसिद्ध मानिने इलाममा अधिकांश..
निगमले बढायो तेलको भाउ प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ११ Monday, August 20th, 2018
नेपाल आयल निगमले फेरी पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि गरेको छ । गयरातिदेखि लागु हुनेगरि निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा १ रुपैया ,डिजेल र मट्टीतेलमा २ ,२ रुपैया बढाएको हो । अब उपभोक्ताले प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ११ , डिजेल र मट्टीतेल ९५ रुपैया तिर्नुपर्नेछ । यसैगरि आन्तरिकतर्पm हवाई ईन्धन प्रतिलिटर ४ रुपैया ५० पैसा र हवाई ईन्धन अन्तराष्टियतर्फ प्रतिब्यारेल ५० डलर वृद्धि गरेको छ..
पर्वतःराजपत्रमा अनुगमन युनिट Wednesday, August 15th, 2018
रामकृष्ण लामिछाने पर्वत । नेपालको संविधान ०७२ अनुसुची ८ द्धारा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिदाँ पनि जनप्रतिनीधीहरुल प्रायः बेखबर छन् । कुश्मानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुवास कुमार लामिछानेले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको हँदा आफुहरु बजार अनुगमन युनिट बनाउने प्रक्रियामा रहेको बताए ।..
अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्-तिर्न नसक्नेलाई धेरै कर लगाइएको छैन Sunday, August 12th, 2018
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीर्न नसक्नेलाई करको बोझ नलगाउने स्पष्ट पारेका छन् । सर्वसाधारणलाई करको बोझ लगाउने काम भएकोे भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले कमजोर वर्गलाई कर नलगाउने स्पष्टिकरण दिएका हुन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि करको प्रावधान राखिएको स्मरण गराए । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित..